आफैले भा’ई मानेर तिहारमा टिका लगाएको भाईसंग श्रीमती गएपछि, श्रीमान र छोराको आँखामा आशु रोकिएन ! - Nepal Insider
आफैले भा’ई मानेर तिहारमा टिका लगाएको भाईसंग श्रीमती गएपछि, श्रीमान र छोराको आँखामा आशु रोकिएन !
February 13, 2020 200
श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा छन् । घरमा श्रीमती आफैले भाई मा”नेर तिहारमा टिका लगाएको ब्यक्तिसंग भा”गिन् । सोच्दा पनि पा””प लाग्ने स”’म्बन्धमा यस्तो घा”त” गर्ने महिलाका छोराले अहिले झन र”ह”स्यमय कुरा खोलेका छन् ।श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा थिए । श्रीमान घर आए लगत्ती उनको श्रीमती भने आफैले भाई मानेर तिहारमा टिका लगाएको भाईसंग भा”गिन् ।
किशोर आचार्यले आफुले दिदी भनेर तिहारमा टिका लगाएकी महिलालाइ नै लिएर हिँडेका हुन् । अम्बिका नाम गरेकी महिला आफ्नै भाइसंग भा”गेपछि समाजमा अहिले महिलाका बारेमा धेरै न’का’रात्म”क कुरा उठ्न थालेको छ । किशोर पनि विवाहित हुन् भने अम्बिकाका १५ वर्षका छोरा छन् । श्रीमती आफ्नै भाईसंग भा”गेको थाहा पाएपछि उनका श्रीमान अहिले विदेशवाट नेपाल फर्किएका छन् ।
आफ्नै दिदी लिएर हिँडेपछि किशोरको श्रीमतीले पनि स”’म्बन्ध तो’डेकी छन् । आफुलाई धो”का दिएर दिदी मानेको महिलालाई नै लिएर हिडेपछि उनले अब विगत को”ट्या”एर बस्न नसक्ने बताएकी छन् । उनले आफुलाई किशोरले झु’क्याएर विवाह गरेको र आफ्नो दिदीको घर भनेर एउटा घरमा लगेका थिए । उनले आफ्नो जिवनलाई अगाडी बढाइसकेका कारण त्यस विषयमा कुरा पनि गर्न नचाहेको बताएकी छन् ।
अम्बिकाका श्रीमान ऋषी अहिले न्यायको माग राख्दै मिडियामा आएका छन् । १५ वर्षका छोरालाई सबैकुरा थाहा भएपनि उनले कसैलाई भन्न सकेनन् । आमा अम्बिकाले बाबालाई भनिस् भने म म”’रि””दिन्छु भनेर ध””’म्की दिने गरेकी थिइन् । त्यसैले कसैलाई पनि भन्न नसकेको छोराले बताए । नवलपरासीको वर्दघाटमा भएको यो घटनाले अहिले सारा नेपालमा एउटा त””’रंग ल्याएको छ । अम्बिका र किशोर एउटै को”ठामा बस्थे भने छोरालाई अर्कै कोठामा सु’ता””उने गरेका थिए ।
ऋषी वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर थिए । श्रीमती अम्बिकाले आफ्नो घर देख्न नपाई म””’र्ने भएँ भनेर भनेपछि ऋषीले ऋण धन गरेर घर बनाइदिएका थिए । तर अम्बिका भने त्यो घर बेचेर बे’प””त्ता भएकी छन् । अम्बिका नाम गरेकी महिलालाई किशोरले आफ्नै दिदी भनेर श्रीमतीलाई चिनाएका थिए ।
किशोरले विवाह गरेर अम्बिकाकै घरमा लिएर गएका थिए । अम्बिकाले नै किशोरको श्रीमतीलाई बुहारीको रुपमा भित्र्याएकी थिइन् । त्यसैले उनीहरुको त्यसतो नराम्रो ‘स”म्बन्ध होला भनेर किशोरको श्रीमतीले कल्पनामा पनि नसोचेको बताएकी छन् । अहिले किशोरको श्रीमतीले आफु जिवनमा अगाडी बढीसकेको र त्यो विगत सम्झेर नबस्ने बतायन् । अम्बिकाको छोराले किशोरलाई मामा भनेर सम्बोधन गर्थे ।
Prevनेपाल एयरलाइन्स ए–३३० जहाजमार्फत चीनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याइँदैँ !
Nextबिजुलीबाटै देशलाई धनी बनाउँछौः कुलमान घिसिङ
दैलेखमा पेट्रोल भएको पक्का !
महँगो जन्म दिन मनाउने ओलिलाई भिम रावलको प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यू देश आमा हो कसरी काटेर खान सक्नुभो ?(भिडियो सहित)